We Fight We Win. -- " More than Media ": သမိုင်း ထဲ က ပုံ ရိပ်
ဒီပုံကို ကြည့်ရင် မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကျက်သရေရှိမှုနဲ့
စိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေတဲ့ မျက်နှာလေးကို မြင်ကြရမှာပါ။
ပုံစာမှာ ထိုးထားတဲ့အတိုင်း သူဟာ တစ်ခေတ်တစ်ခါက နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ခိုင်ခင်ဦးပါပဲ။
၈၈အရေးတော်ပုံမှာ သူလည်း ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တတပ်တအား ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် အာဏာရူးတွေက အကြံအစည်ရှိရှိ ယုတ်မာခဲ့တယ်။ နာမည်ကျော်လည်း ဖြစ်၊ မိန်းမသားလည်း ဖြစ်နေတော့ ထောင်ထဲဆွဲသွင်းလို့ မကောင်းတာကြောင့် ပိုပြီး ထိရောက်တဲ့နည်းနဲ့ တိုက်ခိုက်ဖို့ ကြံစည်ခဲ့တယ်။
စတိတ်ရှိုးတစ်ခုမှာ ခိုင်ခင်ဦး သီချင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့အကြံအစည်အတွက် ဂွင်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက ခိုင်ခင်ဦးဟာ တီရှပ်ခပ်ပွပွကို ၀ပ်ဆင် သီဆိုခဲ့တယ်။ စတိတ်ရှိုးဆိုတော့ ပြေးပြေးလွှားလွှား လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဆိုရတာပေါ့။ ဒါကို အသင့်ချောင်းနေတဲ့ အာဏာရှင်ရဲ့ လက်ပါးစေတွေက စတိတ်ရှိုးစင်အောက်ကနေ ပင့်ပြီး ဗီဒီယိုရိုက်ယူတယ်။
တီရှပ်ပွပွအောက်ကနေ ရင်ဝတ်ဘရာဇီယာ တစ်စွန်းတစ်စ အဲဒီဗီဒီယိုမှာ ပါဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုကို အများပြည်သူကြားထဲ ဖြန့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်မျိုးညွှန့်(အဲဒီတုန်းက ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှုး) က မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယဉ်မှုပြုတယ်ဆိုပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့် ပိတ်လိုက်ပါတယ်။
အောက်က မပေါ်ပေါ်အောင် ပင့်ရိုက်မှတော့ ဂွင်ထဲဝင်ပြီပေါ့။ တကယ်တမ်းအဲဒီတုန်းက ခိုင်ခင်ဦးဝတ်ထားတာ ဘာမှ မဆိုးရွားပါ။ ခပ်ပွပွ တီရှပ်သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်တာပါ။ ခိုင်ခင်ဦးဟာ အဲဒီကတည်းက အနုပညာလောကထဲက ထွက်သွားရတာပါပဲ။ ယနေ့ သုဝဏ္ဏ၊ ကမာကြည်တံတားအဆင်းနားက ခြံမှာ နေထိုင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ (ဒေါ်) ခိုင်ခင်ဦးဟာ မိသားစုနဲ့ အေးချမ်းစွာ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းနေပြီး ပကာသနမဖက်တဲ့ ပရဟိတအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေတာ အနီးဝန်းကျင်ကလူတွေ အားလုံးသိကြပါတယ်။
မခိုင် ခင် ဦး ကို ငါတို့လဲလေးစားပါတယ် .သူတို့ တက်ကြွစွာပါဝင် ခဲ့တာကိုလဲ ယုံကြည်တယ်။
ဒါပေမဲ့ အချက်အလက်တွေတော့ အမှန်အတိုင်း ရေးကွ ။ အဲဒီတုန်းက video file ကို ပြန် ရှာလို့ ရရင် ရှာလိုက်ဦး . သူဝတ်တာ အခုခေတ် အ ခေါ် ကြိုးတစ်ချောင်းပုံစံ ကို ရင် ဘတ်ပေါ်အောင် ဝတ်ခဲ့တာ
အဲဒိတုန်းက ရှားရှားပါးပါး ဝတ်ကြတာဆိုလို့ သူနဲ့ တင့်တင့်ထွန်း လောက်ပဲ ရှိတယ် ။
သူကလဲ နဲနဲ ဟော့သွားတယ် . အဲဒါကို ဂွင် ချောင်းနေတဲ့ အစိုးရက လုပ်ပလိုက်တာ .
ဘာတီရှပ်ပွပွ မှမဟုတ်ဘူး ဘာအောက်ကပင့် ရိုက်တဲ့ video မှမရှိဘူး .
မင်းတို့ လုပ်စားကောင် တွေ အချက်အလက်မှန်မှန် နဲ့ ဘက်မလိုက်ပဲ မ ရေးတတ်ပါဘူး ကွာ
အ ခြောက် မိုးသီး ရာ
မင်း ဒီ comment ကို မတင် ရဲဘူးဆိုတာ ငါသိတယ်
မင်းသိစေချင် လို့ ငါရေးလိုက်တာ
ရန်ကုန်ရောက် ရင် တော့ မင်း လမ်း မ တော် ဘက် ရောက် ရင် မင်းကို စောင့်ပြီး ဗျင်းမဲ့ ငါ ရှိတာ မင်းသိထား အ ခြောက် မိုးသီး